Izindaba - Yini i-Metaverse？ nokuthi bathatha okuthile okusha empilweni yethu？
Yini iMetaverse？ nokuthi bathatha ini okusha empilweni yethu？
Ezweni elibonakalayo, izinto ezidinga ukulingiswa okuningi futhi ezisebenza kanzima zizoba lula, zidinga kuphela ukusebenza kwekhodi ukuqedela ukuqeqeshwa, futhi ukucabanga kwaleli zwe elibonakalayo kudlulela ngalé kwalokho, sekuvele kubonakala kunakho konke yamakhono esikhala sethu sangempela.
I-Facebook, i-Epic Games nezinye izinkampani zitshala kakhulu imali ekwakheni imetaverse, okwathi isikhathi eside kwaba yigama elitholakala kuphela kumanoveli we-dystopian science-fiction. Okushoyo ukuthi esikhundleni sokuxhumana nabangane bakho ku-inthanethi njengoba kunjalo manje, ungahlangana nabo endaweni yedijithali kuma-avatar akho edijithali, usebenzisa ihedisethi yangempela engokoqobo noma enye idivayisi
I-metaverse yokuqala yadalwa ngo-1992 inoveli ye-cyberpunk ethi 《Snow Crash》 .Kule ncwadi, umlingiswa ophambili uHiro Protagonist usebenzisa iMetaverse njengendlela yokuphunyuka empilweni yakhe. Kepha kugcwele nezinkinga, kubandakanya nokulutha kwezobuchwepheshe, ukubandlulula, ukuhlukumeza nobudlova, okutheleka ngezikhathi ezithile emhlabeni wangempela.
Enye incwadi - kamuva i-movie eqondiswe nguSteven Spielberg - eyenze lo mqondo wathandwa yiReady Player One. Incwadi ka-Ernest Cline yango-2011 yahlelwa ngo-2045, lapho abantu babalekela emdlalweni wangempela njengoba umhlaba wangempela ususenkingeni. Emdlalweni, uhlangana nabanye abadlali futhi uhlanganyele nabo.
Uchungechunge lwango-2013 lwaseJapan i-Sword Art Online (SAO), olususelwa kunoveli ekhanyayo yesayensi-yamanga enegama elifanayo nguRei Kawahara, laqhubekela phambili. Ihlelwe ngo-2022, kulo mdlalo, ubuchwepheshe buthuthuke kangangokuba uma abadlali befa emhlabeni obonakalayo bangashona empilweni yangempela futhi, okuholele ekuphazanyisweni nguhulumeni. kungagcini kulezi zincazelo ezivela eqanjiwe lesayensi. Kungaba okuningi kakhulu, noma ngaphansi, njengoba i-ecosystem iguquka. Njengoba kuchazwe nguZuckerberg ngesikhathi kufonelwa amaholo ngenyanga edlule, “Kuyindawo ebonakalayo lapho ungaba khona nabantu ezikhaleni zedijithali. Ungahle ucabange ngalokhu njenge-intanethi ehlanganisiwe ongaphakathi kuyo kunokumane ubuke nje. Sikholelwa ukuthi lo uzoba ngumlandeli we-intanethi ephathekayo. ”Okushoyo ukuthi esikhundleni sokuxhumana nabangane bakho ku-inthanethi njengoba kunjalo manje, ningahlangana kuma-avatar adijithali, nisebenzisa ihedisethi engokoqobo noma enye into idivayisi, bese ungena ngaphakathi kwanoma iyiphi indawo ebonakalayo, kungaba ihhovisi, ikhefi noma isikhungo semidlalo.
Manje yini imetaverse?
I-metaverse izwe elibonakalayo elixhunywe emhlabeni esihlala kuwo futhi sabiwe ngabantu abaningi.Linomklamo ongokoqobo nemvelo yezomnotho, futhi une-avatar yangempela, kungaba umuntu wangempela noma umlingiswa. isikhathi nabangane.Uzoxhumana, isibonelo.
Ngokuzayo, kungenzeka sihlale endaweni enjalo meta njengamanje.Kungaba ukuxhumana okuningana, hhayi ifulethi kepha indawo ye-3D stereoscopic, lapho besingazizwa khona lezi zithombe zedijithali eduze komunye nomunye, ngohlobo oluthile ukuhamba kwesikhathi. Kungalingisa ikusasaKuzoba nezinhlobo eziningi ze-metaverse, ngokwesibonelo, imidlalo yevidiyo ingenye yazo, futhi i-Fortnite ekugcineni izoguquka ibe uhlobo lwe-metaverse, noma okunye okuvela kukho. Ungacabanga ukuthi ngelinye ilanga iWorld of Warcraft izophenduka ibe uhlobo oluthile lokuhlenga, kube nezinguqulo zemidlalo yamavidiyo, futhi kube nezinguqulo ze-AR. Ungafaka izibuko zethu, noma ifoni yakho. phambi kwakho, kukhanyiswe kahle, futhi kungokwakho.Sizobona lolu ungqimba oluphakeme ngaphezulu komhlaba, okungaba uhlobo lwesendlalelo esikhulu kakhulu uma uthanda.Okungukuthi, sinezakhiwo zangempela, ukukhanya, ukushayisana kwezinto , namandla adonsela phansi kulo mhlaba, kodwa-ke ungenza ukuthi kuguquke ngokuthanda kwakho uma ufuna.Ngakho ngaphezu kokuzwa inguqulo yangempela ye-My World, amathuba ebhizinisi awapheli. Esimweni se-metaverse yezimboni, obunye bobuchwepheshe obubaluleke kakhulu imvelo ye-VR esekwe ekulingiseni ngokomzimba.Uklama into nge-metaverse futhi uma uyiphonsa phansi izowela phansi ngoba ithobela imithetho ye-physics. Izimo zokukhanyisa zizofana ncamashi nendlela esizibona ngayo, nezinto zokwakha zizolingiswa njengezenziwe ngokomzimba. ”
Okwamanje i-Omniverse, ithuluzi lokwakha lo mhlaba obonakalayo, iku-beta evulekile, ihlolwa yizinkampani ezingama-400 emhlabeni jikelele. Isetshenziswa yiBMW ukwakha imboni yedijithali. Isetshenziswa futhi yi-WPP, inkampani yezentengiso enkulu kunazo zonke emhlabeni, futhi isetshenziswa ngabakhi bezakhiwo zokulingisa abakhulu.
Ngamafuphi, i-Omniverse inika amandla abantu abaningi ukudala okuqukethwe endaweni yesikhulumi, kunika amandla wonke umuntu ukudala futhi alingise imihlaba eyabiwe ye-3D eyabiwe ehambisana nemithetho ye-physics futhi ehambelana kakhulu nezwe langempela, njengezwe elibonakalayo elidalwe ngo-1: 1 nge idatha yangempela.
Umbono nokusetshenziswa kwepulatifomu ye-Omniverse ngeke kukhawulelwe kuphela ezimbonini zemidlalo nezokuzijabulisa, kepha kuzokwakhiwa, ezobunjiniyela nokwakha, kanye nezokukhiqiza. Ukutholakala kweNvidia Omniverse Enterprise Edition manje sekulungele ukubanjwa futhi kutholakala kuzingxenyekazi ezifana ne-ASUS, BOXX Technologies, iDell, HP, Lenovo, Bienvenue neSupermicro.
Ukuhlolwa kokusebenza kwamasondo kuzosebenza kahle kakhulu Kuyacaca ukuthi kunamathrekhi amaningi ongakhetha kuwo kulo mhlaba obonakalayo.Kwimboni yamasondo, inani elilula kakhulu lomhlaba obonakalayo ukwenza ukuthuthukiswa kwamasondo asebenza kahle kusheshe kakhulu. ukulingisa idatha yemephu, ukulingisa kungenziwa ukuze kuhlolwe.Ngaphandle kokukhula kokusebenza kahle, kokubili ukuphepha nezindleko kuzoncishiswa kakhulu.
Isibonelo, ukuhlolwa kokusebenza kwamasondo kuvame ukwenziwa emafemini anezivivinyo ezithile ezilula zomthelela, ezinganele ukuhlola zonke izici zokusebenza kwamasondo. Ukuhlanganiswa kwabantu bedijithali bangempela nobuchwepheshe njengokuhlinzeka kuzovumela ukulingiswa kokumelana nemoto ngesivinini esikhulu nokumelana nokugqwala kwamasondo ezimweni zezulu ezimbi kakhulu ngaphansi kokuqeqeshwa kwemvelo okulingisiwe. Izimoto eziningi ezihlolwa emgwaqweni izoguqulwa futhi ibe yimigqa yekhodi ezobalwa futhi ifundwe ngemuva, futhi isoftware epholishiwe ingasetshenziswa ngqo kwinto engokoqobo.
Futhi ngekusasa, kithina uqobo kungukushintsha nokuxubana kwesikhala sangempela nesibonakalayo, lapho ungadlala khona ubunikazi obuningi noma ucwilise kwesinye isikhala ukuthola owehlukile. noma njenge-GTA5 engapheli yemephu simulator elingisa indawo yonke.
Isikhathi Iposi: Aug-13-2021